कानूनमा त लेखेको छ तर म मान्दिन – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र १०
मैले भनें संस्थाको ५ वर्षको प्रतिवेदन एकै चोटि लिनु पर्दछ, गलती देखियो भने कारवाही गर्न मिल्छ र त्यसमा पनि यी सब कुरा सोचने काम कानून निर्माताको हो । हाम्रो काम कार्यान्वयन मात्र हो यहाँ बाट कानून कार्यान्वयन नभएमा अदालतको ढोका घचघचाउन सकिन्छ भनें तर अन्तमा बाध्य भएर र एक वर्षको नवीकरण गराएको कागज लिएर फिर्ता भएँ । मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि घट्ना हो अन्यत्र पनि यस्ता सवाल जवाफ दिनभर भै नै रहन्छन् ।
अमेरिका कै दुइटा उदाहरण अरु पनि । दुइ जनाले यौटा घर खरीद बिक्री को कुरा गरेछन् । कुरा मिल्यो बिक्रेता र बिक्रेता घरमा बसेर यल ष्लिभ बिक्री फार्म भरेर मालपोत कार्यालयमा इमेल गरे । कार्यालयले बिक्रेता संंग जग्गा धनी प्रमाण पत्रको “सील ” पठाउन भन्यो उसले हुलाकबाट शील पोस्ट गरी दियो । दोश्रो दिन खरीद कर्ताको नाममा हुलाक मार्फत नयाँ सिल आयो । रजिष्ट्रेशन दस्तुर अनलाइन पठाई दिए पुग्यो । न्यूयोर्क राज्यको एक जना मानिसले चालीस करोड भन्दा माथिको कारोबार टेक्सस राज्य मा गर्ने भन्ने कम्पनी दर्ता गर्न टेक्ससमा रजिष्ट्रर को कार्यालयमा विनियम सहित अनलाइन निवेदन पठायो । रजिष्ट्रर ले तपाई को विनियम तपाईको वकीलले प्रमाणित गर्ने हो कि ? कम्पनी को वकीलले ? भनेर सोधि पठायो । सेवाग्राहीले कम्पनीबाट गराई दिनुस भन्यो र चौथो दिन उसलाई कम्पनी दर्ता भएको इमेलमा प्रमाण पत्र हुलाक बाट आउदै छ भनेर जानकारी आयो । सेवाग्राही ले टेक्सस को यौटा साथीको घर को ठेगाना मात्र देखाउनु परेको थियो । काम सकियो ।
कस्तो नीति ? कति फरक ? हामीले सेवाग्राही हामी संग आई रहोस नमस्ते नटुटोस भन्छौेँ, तर सभ्य र उन्नत देशले उद्योगहरुको अधिकतम स्थापना होस, कुनै पनि काममा सेवाग्राहीको भरसक मुख देखन नपरोस भनेर लचीलो नीति अपनाउँछन, सेवाग्राही लाई त कार्यालय कहाँ छ भन्ने कुरा पनि थाह हुँदैन ।
यसो हेर्दा हामी कहाँ प्रशासनिक सूत्रहरु साह्रै पारम्परिक छन् र आजको युगमा नसुहाउँदा त छन् नै दुखदाई पनि छन् । मनोगत काम, तजवीजी निर्णय र हाकिमका सनक हाम्रा विशेषता छन् र भानुभक्तको भोली भोली को अनुभवलेखनका मिति देखि आज सम्म पनि हामीले आफनो सुधार गर्न चाहेका छैनौं । हामी दिन रात तालीम गोष्ठी र सेमिनारहरु मा मीटिंग, सिटिंग, इटिंग, फिटिंगमा व्यस्त रहेर पनि उपलब्धिहीन छाैं । यसको प्रमुख कारण हो सरुवाको गलत सिस्टम अर्थात आज हुलाकमा ,भोली शिक्षा,पर्सी माल, निकपर्सी प्रशासन आदि कार्यालयहरुमा चहार्नु वा चहार्न पठाउनु । यसले गर्दा एक ठाउँको ज्ञान, अनुभव शिक्षा र तालीम अर्काे ठाउँमा गएपछि निष्प्रभावी हुनु र नयाँ कार्यालयमा कर्मचारी को अनुभवहीनता कानूनी ज्ञान र विशेषज्ञताको जीवन भर अभाव रहनु, कार्यालयको प्रकृति अनुसारको मानिस कार्यालयले नपाउनु, तर विशेषज्ञताको स्थितिमा रहेका विभाग र कार्यालयहरुमा त झन् अभिजाततन्त्रीय हुकुमी शासनकै अवशेष र त्यसैको आडमा उभिएको भ्रष्टाचार रुपी कालो नागको डसाईले जनता त्राहिमाम छ । परिणामस्वरुप सेवा ग्राहीले दुख पाउनु संभवतः आजको नेपालीको प्रारब्ध नै हो ?